लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदै आज,कसले मार्ला बाजी ? « Kalakhabar
लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदै आज,कसले मार्ला बाजी ?
प्रकाशित मिति : सोमबार, १७ जेष्ठ २०७८ ०९:०९
कलाखबर,१७,जेष्ठ–काठमाण्डौं । लुम्बिनीमा रिक्त रहेको एक पदका लागि आज राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ । माओवादी केन्द्रबाट विजयी अर्घखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रदेश राजधानी दाङको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरिएको छ ।